စက်တင်ဘာ ၁၂ ရက်ကဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်အဖြစ်အပျက်မှကျွန်ုပ်တို့အဘယ်အရာမျှော်လင့်နိုင်သနည်း အိုင်ဖုန်းသတင်း
စက်တင်ဘာ ၁၂ ရက်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်ကနေဘာတွေမျှော်လင့်နိုင်သလဲ
Luis Padilla | | iPhone အတွက် X ကို, NOTICIAS
အတည်ပြုသည် စက်တင်ဘာ ၁၂ ရက်ည ၇ နာရီ (အိုင်ဘာရီးယန်းကျွန်းဆွယ်အချိန်) တွင်အက်ပဲလ်ကအိုင်ဖုန်းအသစ်ကိုတင်ပြရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆင့်ခေါ်ခဲ့သည်မီဒီယာများက iPhone 8 အဖြစ်နှစ်ခြင်းပေးခဲ့ပြီး၎င်းတို့အနက်မှအရာအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့သိပြီးဖြစ်သော်လည်းမည်သည့်အရာမှအတည်ပြုခြင်းမရှိသေးပါ၊ သို့သော်မကြာသေးမီရက်သတ္တပတ်များအတွင်းပေါက်ကြားမှုအားလုံး၏အဆိုအရ iPhone အသစ်ကို Apple TV နှင့် Apple Watch တို့ကမီးမောင်းထိုးပြသည့်အခြားသတင်းများနှင့်အတူပါလိမ့်မည်။
iPhone 8 နှင့် iPhone 7s နှင့် 7s Plus တို့ပါ ၀ င်သည်။ Apple TV ၏ပဉ္စမမျိုးဆက်ဖြစ်သော 4K နှင့် HDR ပါဝင်မှု၊ Apple Watch ၏တတိယမျိုးဆက် 4G ဆက်သွယ်မှုနှင့် ... ဆော့ဖ်ဝဲလ်သတင်းများကိုမမေ့သင့်သည်၊ iOS 11 တွင်တွေ့မြင်ရ လာမယ့် Apple event မှဘာတွေမျှော်လင့်နိုင်ပါသလဲ။ ဒါကစက်တင်ဘာ ၁၂ ရက်အတွက်ငါတို့လောင်းတာပါ။
1 iPhone 8၊ ဒီဇိုင်းအသစ်နှင့်လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်များ
1.1 OLED Display ကို
1.4 induction charging
1.5 IP68 ရေခုခံ
1.7 စွမ်းဆောင်ရည်, RAM, စျေးနှုန်းနှင့်ဖြန့်ချိသည့်ရက်စွဲ
2 iPhone 7s နှင့် 7s Plus များ
3 Apple TV အသစ် ၅
4 Apple Watch LTE အသစ်
iPhone 8၊ ဒီဇိုင်းအသစ်နှင့်လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်များ
၎င်းသည်အက်ပဲလ်ပွဲတော်၏ကြယ်ပွင့်ကြီးဖြစ်လာမည်။ အားလုံးစမတ်ဖုန်းအသစ်ကိုအာရုံစိုက်မည်။ အစဉ်သိသမျှအရာရာတိုင်းကိုကျွန်ုပ်တို့သိပြီးဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့ဘာမှမသိ၊ သူ၏အမည်ပင်မသိပါ။ iPhone 8 ကိုဒီနှစ်မှာအသစ်ထွက်လာမယ့်ဒီဇိုင်းနဲ့လာမှာပါ သို့သော်အခြားဖြစ်ရပ်များနှင့်မတူဘဲ၎င်း၏အတွင်းပိုင်းကိုလုံးဝပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံလိမ့်မည်။ "s" မပါသောမော်ဒယ်များသည်ကောင်းမွန်မှုရှိ၊ မရှိသို့မဟုတ် "s" များသည်ယခုနှစ်တွင်ထိုက်တန်သူများဟုတ်မဟုတ်နှင့် ပတ်သက်၍ ပုံမှန်အကြပ်အတည်းသည်တရားဝင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
OLED Display ကို
ပထမ ဦး ဆုံးပုံစံမှလက်ရှိ iPhone7နှင့်7Plus သို့ OLED မျက်နှာပြင်သို့သယ်ဆောင်လာသည့်အစဉ်အလာ LCD မှ iPhone မျက်နှာပြင်ပြောင်းလဲခြင်းအကြောင်းကြာမြင့်စွာကတည်းကပြောနေသည်။ ၎င်းဖန်သားပြင်အသစ်၏အားသာချက်များကိုရိုးရာ LCDs များထက်ပိုမိုလက်တွေ့ကျသောလူမည်းများနှင့်လူဖြူများဖြင့်ပိုမိုပါးလွှာသောကြောင့်အကျဉ်းချုံး။ ဖော်ပြနိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် pixel များလွတ်လပ်စွာမီးထွန်း။ အနက်ရောင်များမှာတိုက်ရိုက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်7Plus ထက်သေးငယ်သည့်ဖုန်းရှိသော်လည်းပိုမိုကြီးမားသောမျက်နှာပြင်ပါသည့်တိုင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုလျော့နည်းသွားစေလိမ့်မည်။.
မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားနှင့် ပတ်သက်၍ တညီတညွတ်တည်းသဘောတူညီမှုမရှိပါ။ ၅.၈ လက်မအကျယ်ရှိသော ၅.၈ လက်မအကျယ်ရှိသောမျက်နှာပြင် ၅.၈ လက်မသည်ကျွမ်းကျင်သူများအကြားသဘောတူညီမှုအများဆုံးရရှိသောအချက်အလက်များဖြစ်သည်။ မျက်နှာပြင် resolution သည် ၂၈၀၀ × ၁၂၄၂ ဖြစ်ပြီးအသုံးဝင်သောနေရာမှာ ၂၄၃၆ × ၁၁၂၅ ဖြစ်သည်။ “ အသုံးမရသော” နေရာသည်ကျွန်ုပ်တို့ဖွင့်ထားသော application ပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားသော virtual ခလုတ်များအတွက်သီးသန့်ထားရှိမည်ဖြစ်သော်လည်းဗီဒီယိုများသို့မဟုတ်ဂိမ်းများကဲ့သို့မာလ်တီမီဒီယာအကြောင်းအရာများကိုကြည့်ရှုရန်မျက်နှာပြင်၏စုစုပေါင်းမျက်နှာပြင်ကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဖုန်းရဲ့ရှေ့မျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးနီးပါးကိုသိမ်းပိုက်နိုင်မယ့်ဘောင်မရှိတဲ့မျက်နှာပြင်အကြောင်းပြောနေတာပါ။
start button ကဘာလဲ။ ၎င်းသည်လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားပြီးလိုအပ်သည့်အချိန်တွင်သာဖန်သားပြင်တွင်ပေါ်လာလိမ့်မည်။ စကားပြောတာတောင်မှရှိတယ် home button အတွက်ကြိုတင်မှာယူထားသည့်အလုပ်များကိုလုပ်ဆောင်ရန် Apple သည် iPhone 8 သို့ multi-touch အမူအယာများကိုထည့်နိုင်သည် အိုင်ပက်ဒ်တွင်မည်သို့အသုံးပြုထားသည်နှင့်တူသော application များကိုပိတ်ခြင်းသို့မဟုတ် multitasking လုပ်ခြင်းကိုရယူခြင်းကဲ့သို့သောယခုအချိန်အထိ။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အတည်ပြုရန်မရှိသေးသောအရေးကြီးဆုံးသောအချက်တစ်ချက်ဖြစ်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့သည်အိုင်ကွန်၏အိမ်ခလုတ်ကိုအစားထိုးပုံကိုအက်ပဲလ်ကပြသခြင်းမတိုင်မှီအတည်မပြုနိုင်သောထင်ကြေးများဖြစ်သည်။
အကယ်၍ home ခလုတ်မရှိဘူးဆိုရင်ဖုန်းကိုသော့ဖွင့်ဖို့ဒါမှမဟုတ် Apple Pay သုံးပြီးငွေပေးဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘယ်လိုခွဲခြားမလဲ။ အချိန်ကြာမြင့်စွာကတည်းက Touch ID, fingerprint sensor ပါဝင်သည့်အကြောင်းဖန်သားပြင်တွင်စကားပြောခဲ့ကြသော်လည်းနည်းပညာပြီးသားဖြစ်သော်လည်း၎င်း၏အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုသည် ပို၍ နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသည်ထက် Apple ကစိတ်ကူးကိုစွန့်လွှတ်ခဲ့ရသည် ။ အနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ Touch ID sensor ရဲ့ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့တည်နေရာအကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်သုံးစွဲသူအများစု၏အမြင်တွင်ကြီးမားသောဆုတ်ယုတ်မှုဖြစ်နိုင်သည့် Android ထုတ်ကုန်အများစုနည်းတူအဆုံးတွင် Touch ID ကိုအစားထိုးမည့်မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုစနစ်အသစ်တစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်ဟုခန့်မှန်းရသည်။
ယခုအချိန်အထိကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားကိရိယာများတွင်စမ်းသပ်နိုင်ခဲ့သောမျက်နှာအသိအမှတ်ပြုမှုစနစ်များသည်အလွန်အားနည်းချက်များရှိနေပြီးကိရိယာ၏ပိုင်ရှင်၏ရိုးရှင်းသောဓာတ်ပုံသည်ဤလုံခြုံရေးယန္တရားကိုကျော်လွှားရန်လုံလောက်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ Apple သည်၎င်းစနစ်ကိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်နိုင်သည်ဟုထင်ရသည်။ 3D နှင့်အနီအောက်ရောင်ခြည်အာရုံခံကိရိယာများကြောင့်တရား ၀ င်သူမည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုရန်လွယ်ကူလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုမှုကိုပင်မှောင်မိုက်နေသည့်အချိန်၊ မျက်နှာများပေါ်ရှိအရာဝတ္ထုများ (မျက်မှန်သို့မဟုတ် ဦး ထုပ်များ) နှင့်နေရာအမျိုးမျိုးမှပင်အသုံးပြုနိုင်သည် ငွေပေးချေမှုလုပ်တဲ့အခါသင့်ကိုခွဲခြားသိနိုင်ဖို့အလျားလိုက်အနေအထားရှိတဲ့ iPhone လိုပဲ။ ၎င်းသည်ဆော့ဖ်ဝဲနှင့်ဟာ့ဒ်ဝဲအဆင့်တွင် iPhone 8 ၏ထူးခြားဆန်းသစ်သောတီထွင်မှုများထဲမှတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ဖြစ်ရပ်သည်၎င်းကိုမည်သို့လုပ်ဆောင်ပုံကိုရှင်းပြရန်ကောင်းမွန်သောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပေးမည်မှာသေချာသည်။
လက်ရှိ iPhone7ထက်အများကြီးကြီးကြီးမားမားမကြီးမားသည့်အရွယ်အစားပြောင်းလဲခြင်းအပြင် iPhone 8 အသစ်သည်သူထုတ်လုပ်သည့်ပစ္စည်းများကိုလည်းပြောင်းလဲပစ်လိမ့်မည်။ သံမဏိနှင့်ဖန်ခွက်သည် iPhone သို့ပြန်သွားလိမ့်မည်၊ iPhone4နှင့် 4S တွင်အသုံးပြုထားပြီးဖြစ်သောကျွန်ုပ်တို့သည်နောက်တဖန်သံမဏိဘောင်များနှင့်အတူနောက်ကျောလုံးလုံးဖန်ပြန်ပါလိမ့်မည်။ အထက်ဖော်ပြပါ iPhone4နှင့် 4S တို့၏ဖြစ်ရပ်များနှင့်ဆန့်ကျင်သော်လည်းအရောင်မပါသောဘောင်များရှိသော်လည်း iPhone 8 သည်ရွေးချယ်ထားသောအဆုံးပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားသောအရောင်များဖြင့်ဘောင်များရှိလိမ့်မည်။ ယိုစိမ့်မှုအရဖြစ်နိုင်ခြေသုံးချောင်းသာရှိသည်။ တောက်ပသောအနက်ရောင်ဘောင်နှင့်အတူအနက်ရောင်, ရွှေဘောင်နှင့်အတူရွှေ (ကြေးနီ) နှင့်ငွေဘောင်နှင့်အတူအဖြူ.
များစွာသောလူများစွာ၏သံသယများထဲမှတစ်ခုမှာ iPhone7ကဲ့သို့ RED မော်ဒယ်လ်ရှိသလားဆိုသည်မှာဤဒီဇိုင်းအသစ်နှင့်အပြီးသတ်နိုင်မည်ဖြစ်သော်လည်းယခုအချိန်တွင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိသေးပါ။ iPhone 8 အတွက်လိုအပ်ချက်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုသည်မျှတမှုရှိချိန်တွင် Apple သည်အရောင်သစ်များကိုနောက်ပိုင်းတွင်ထုတ်ပြန်လိမ့်မည်။။ အကယ်၍ သင်ကအနီရောင် iPhone 8 ကိုလိုချင်လျှင်၎င်းသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်ဒုတိယသုံးလပတ်အထိစောင့်ဆိုင်းရန်လိုသည်၊
၎င်းသည် Apple သည်ဒီဇိုင်းကိုပြောင်းလဲစေပြီးနောက်ဖန်ခွက်ကိုပြန်သုံးနိုင်သည့်အကြောင်းအရင်းတစ်ခုမှာ wireless သို့မဟုတ် induction charging၊ သင်ခေါ်ဆိုလိုသမျှ iPhone 8 ကို Apple Watch လိုပဲအားသွင်းနိုင်ပါတယ်။ Lightning connector ကိုမသုံးပဲသံလိုက်အားသွင်းစက်ကိုသုံးပါတယ်။ ဒီသော့သွင်းခြင်းအားသွင်းမှုအပိုင်းတော်တော်များများတက်လာပြီ၊ ဒါကြောင့်တော်တော်လုံခြုံနေပုံရတယ်၊ ဒါပေမဲ့သူတို့ကစီးပွားဖြစ်နည်းပညာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Qi လို standard standard ကိုသုံးခဲ့လားဆိုတာမသေချာဘူး။။ Appel Watch သည်၎င်းကိုအသုံးပြုသည်။ သို့သော်ပြုပြင်မှုများဖြင့်သင်က Apple မှသတ်မှတ်ထားသောအခြေခံများကိုသာအသုံးပြုနိုင်ပြီး iPhone 8 သည်လည်းအလားတူလမ်းကြောင်းအတိုင်းသွားနိုင်သည်။
အပြောင်းအလဲတိုင်းသည်အမြဲတမ်းအငြင်းပွားဖွယ်ရာများဖြစ်လာသည်နှင့်အမျှပေါက်ကြားလာသည့်အပိုင်းများကအက်ပဲလ်သည် Qi စံနှုန်းဖြစ်သော ၇.၅W ကိုအသုံးပြုမည်ဖြစ်ပြီးလက်ရှိ 7,5W ဗားရှင်းထက်ဝက်ခန့်ပိုများနေသည်။ ဤအချက်အလက်များသည်ကွဲလွဲနေသည်၊ အကြောင်းမှာအချို့ကုမ္ပဏီများက 15W charging bases များထုတ်လုပ်သည်ဟုဆိုကြသည်။ ထို့ကြောင့် Apple သည် iPhone 10 ၏ဤအစိတ်အပိုင်းကိုအသေးစိတ်သိရန်စောင့်ဆိုင်းရမည်။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းထင်ရသည့်အချက်မှာတရား ၀ င်အားသွင်းမှုအခြေခံသည်ယခုနှစ်ကုန်အထိရောက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အားသွင်းမှုစီမံခန့်ခွဲမှုဆော့ဖ်ဝဲနှင့် iOS 11.1 ဗားရှင်းလို့ထင်ရသည့်တိုင်ပြproblemsနာရှိနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤအင်္ဂါရပ်သည် iPhone 8 နှင့်အခြားမော်ဒယ်များကိုလက်လှမ်းမမီပါ၊ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်သီးသန့်မဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
iPhone 8 သည်သမားရိုးကျ USB charger မှတစ်ဆင့် Lightning connector မှတဆင့် ဆက်၍ အားသွင်းနိုင်သည်။ သို့သော်မြန်ဆန်သောအားသွင်းမှုကိုထောက်ပံ့ပေးလိမ့်မည်ဟုပြောသောသူများရှိသော်လည်း charger ကိုသေတ္တာထဲမထည့်ပါ။ လက်ရှိ 29W MacBook USB-C အားသွင်းစက်သည်ဤအားသွင်းအမျိုးအစားအတွက်သင့်တော်သည်။နှင့်၎င်းအတွက်သီးခြား ၀ ယ်ရန်လိုအပ်သည့် USB-C သို့ Lightning cable ကိုအသုံးပြုရမည်။
iPhone 8 အသစ်သည်ကောလာဟလများအရ iPhone7နှင့်7Plus တို့၏ရေခံနိုင်စွမ်းကိုစစ်ဆေးလိမ့်မည်။ ဤမော်ဒယ်များမှာ IP67 အသိအမှတ်ပြုခံရပြီးလာမည့် iPhone 8 သည် IP68 ကိုတက်လိမ့်မည်။ ဒါဘာကိုဆိုလိုတာပါလဲ? ဘယ်မျိုးဆက်သစ်အပေါ်ရေခုခံမှုကိုတိုးမြှင့်ပေမယ့် s လိမ့်မည်၎င်းကိုရေ၌နှစ်မြှုပ်ရန်နှင့်အသုံးပြုရန်အကြံပြုခြင်းမရှိပဲဆက်လက်လုပ်ဆောင်မည်။ အကယ်၍ လက်ရှိမော်ဒယ်များသည်မိနစ် ၃၀ အတွင်းနက်သောအနက် ၁ မီတာအထိကိုင်ထားပါက iPhone 1 သည်မိနစ် ၃၀ တွင် ၁.၅ မီတာအထိကိုင်လိမ့်မည်။ သို့သော်အက်ပဲလ်သည်ရေပျက်စီးမှုကိုမဖုံးအုပ်နိုင်သေးပါ၊
ဒီ iPhone 8 ရဲ့အားသာချက်တစ်ခုကတော့သူ့ရဲ့ကင်မရာတွေပါ။ အနောက်နှင့်ရှေ့ကင်မရာနှစ်မျိုးလုံးသည်အသစ်ပြောင်းခြင်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်အသစ်များတပ်ဆင်ခြင်းများပြုလုပ်လိမ့်မည်။ iPhone 8 ရဲ့နောက်ဘက်ကင်မရာကဆက်ပြီးနှစ်ဆဆက်နေ ဦး မှာပါ။ ဒါပေမယ့်ဒီအခြေအနေမျိုးမှာနှစ်ခုစလုံးမှာ optical stabilization ရှိမှာပါ။ လက်ရှိ7Plus မှာလိုမျိုးတော့ stabilization မရှိပါဘူး။ ထို့အပြင်ဖမ်းယူရာတွင်ပိုမိုမြန်ဆန်သောလေဆာအာရုံစနစ်အသစ်တစ်ခုရှိလာလိမ့်မည် ထို့အပြင်၎င်းသည်ပုံ၏အတိမ်အနက်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်သောဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်လည်းအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။ အက်ပဲလ်သည် ARKit နှင့်မြှင့်တင်ခဲ့သည့် developer များကကြိုဆိုခဲ့ကြသည့် Augmented Reality အတွက်အရေးကြီးသောအရာဖြစ်သည်။ ထိုအကြောင်းပြချက်ကြောင့်ပင် Apple သည်နှစ်ဆကင်မရာအသစ်၏ဒေါင်လိုက်အစီအစဉ်အသစ်ကိုလက်ခံကျင့်သုံးခဲ့သည်။
တိုးတက်မှုဟာ hardware အဆင့်မှာသာမကဘဲ software မှာပါဝါအပြောင်းအလဲတွေပါလာမှာဖြစ်ပြီးအသိဉာဏ်ရှိတဲ့မြင်ကွင်းရှာဖွေတွေ့ရှိမှုစနစ်အသစ်တစ်ခုနဲ့ကင်မရာအသုံးစနစ်ကိုအလိုအလျောက်ပြောင်းလဲပေးမှာဖြစ်ပြီးအကောင်းဆုံးသောဓာတ်ပုံကိုဖမ်းယူနိုင်သည့်အခြေအနေများအရပြောင်းလဲသွားမှာပါ။ ရွေ့လျားမှုကိုယူရန်နည်းလမ်းအသစ်ကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်အလိုအလျောက်ဖမ်းယူသည် အကောင်းဆုံးဓာတ်ပုံကိုရရှိရန်အတွက် iOS 11 code အတွင်း၌လျှို့ဝှက်ထားနေသည်ဟုထင်ရသည်။
ပို၍ အရေးကြီးလာသည်နှင့်အမျှရှေ့ကင်မရာသည်လည်းအထူးသဖြင့်မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုစနစ်အသစ်ဖြင့်တိုးတက်လာလိမ့်မည်။ ရည်မှန်းချက်တွင်အနီအောက်ရောင်ခြည်ထုတ်လွှတ်သည့်ကိရိယာနှင့်သက်ဆိုင်သောလက်ခံသူနှင့်အတူပါ ၀ င်မည်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ပုံ၏အတိမ်အနက်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်အတွက်အတူတကွအလုပ်လုပ်နိုင်ပြီး 3D ပုံရိပ်များကိုရိုက်ကူးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကြောင်းမျက်နှာအသိအမှတ်ပြုမှုစနစ်အတွက်မရှိမဖြစ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ selfies တွေပိုကောင်းလာမယ်၊ ဒါကိုစိတ်မပူပါနဲ့။
စွမ်းဆောင်ရည်, RAM, စျေးနှုန်းနှင့်ဖြန့်ချိသည့်ရက်စွဲ
iPhone 8 အသစ်တွင် 64, 256 နှင့် 512GB တို့၏သိုလှောင်မှုပမာဏပါရှိမည်ဟုခန့်မှန်းရပြီး၎င်းကိုအတည်ပြုရန်ရှိမရှိမသိရသေးပါ။ အနည်းငယ်သာသို့မဟုတ်လုံးဝမပြောသော RAM နှင့်လည်းထပ်တူထပ်မျှဖြစ်သော်လည်း Apple သည် iPhone3Plus ရှိသည့် 7GB ကိုတိုးမြှင့်နိုင်ဖွယ်မရှိချေ။ အတည်ပြုသည်ထက်ပိုမိုပုံရသည်မှာမူအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၉၉၉ ကုန်ကျမည်ကိုသေချာသည်။။ အလောင်းအစားများပြုလုပ်မည်ဆိုပါက 64GB အခြေခံမော်ဒယ်များသည်လက်ရှိ ၇ Plus ၏စျေးနှုန်းထက်ယူရို ၁၁၀၀ မှယူရို ၁,၂၀၀ ကြားတွင်ပုံမှန်ဖြစ်မည်။
စတင်မယ့်နေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီး Apple ကပုံမှန်သတ်မှတ်ရက်ကိုသတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုရင်ပုံမှန်အတိုင်းပါပဲ သောကြာနေ့၊ စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက်မှ စတင်၍ ယခုလ ၂၂ ရက်နေ့မှ စတင်၍ ယူထားနိုင်သည်။ ယင်းသို့ဖြစ်ရန်လွယ်ကူသော်လည်းမည်သည့်နိုင်ငံများကပုံမှန်အားဖြင့် (အမေရိကန်၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနှင့်ဂျာမနီများအပါအ ၀ င်) ပထမပစ်လွှတ်ကိုမည်သည့်နိုင်ငံများသို့ ၀ င်ရောက်မည်ကိုမသိရသေးပါ။ iPhone7ကိုတစ်နေ့တာမှ ၂၅ နိုင်ငံကျော်တွင်ဖြန့်ချိခဲ့သော်လည်း အကယ်၍ ကောလဟာလများကိုဂရုပြုပါက၎င်းသည်ထုတ်လုပ်မှု၏ရှုပ်ထွေးမှုနှင့်ပထမအဆင့်တွင်ရရှိနိုင်မှုနိမ့်မှုတို့ကြောင့် iPhone 25 ကိုနှေးကွေးစေနိုင်သည်။
iPhone 7s နှင့် 7s Plus များ
Premium မော်ဒယ်အပြင် Apple သည်ထိုနေ့တွင်ပင် iPhone7နှင့်7Plus ၏အသစ်ထွက်သောဗားရှင်းများကိုထုတ်လွှင့်မည်ဖြစ်သည်။ iPhone 7s နှင့် 7s Plus သည်ဒီဇိုင်းကိုလက်ရှိဒီဇိုင်းများနှင့်အလွန်ဆင်တူသည်။ သို့သော် iPhone 8 ကဲ့သို့ဖန်ခွက်ကိုပြန်တပ်ဆင်ထားမည်ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းတို့သည်ကြိုးမဲ့အားသွင်းခြင်းပါလိမ့်မည်။ ဒီဒီဇိုင်းအသစ်ဟာ iPhone 8 (အနက်ရောင်၊ ငွေရောင်၊ ရွှေရောင်) အရောင်တွေနဲ့အတူတူပါဘဲ။ ဒါပေမယ့်သူတို့မှာတစ်ခုတည်းသောအပြင်ဘက်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်လိမ့်မယ်။, ရှေ့မျက်နှာစာသည်ယနေ့ခေတ်နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်ရာ၊ ဂရပ်ဖစ်ဘောင်များနှင့် Touch ID အာရုံခံကိရိယာပါ ၀ င်သည့်မူလအိမ်ခလုတ်တို့ဖြင့်ဖြစ်သည်။ ဖန်သားပြင်အရွယ်အစားနှင့် resolution ကိုသာမကဆိပ်ကမ်း၏စွမ်းရည်ကိုလည်းထိန်းသိမ်းထားလိမ့်မည်။
အပြောင်းအလဲများသည် "s" ပုံစံများကဲ့သို့ပင်အတွင်းမှလာလိမ့်မည်။ အထက်ပါဖော်ပြခဲ့တဲ့ကြိုးမဲ့အားသွင်းမှုတွင် iPhone 11 ကဲ့သို့ A8 ပရိုဆက်ဆာနှင့် 3GB RAM အတူတူထည့်သွင်းရမည်။ အက်ပဲလ်ဟာမော်ဒယ်သုံးမျိုးလုံးကိုတူညီတဲ့စွမ်းအားရှိစေချင်တယ်။ သူတို့ကို "ပရီမီယံ" လုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ခွဲခြားမယ်၊ iPhone 7s နှင့် 7s Plus တို့တွင်မရှိသောအသစ်အဆန်းများအနက်တစ်ခုမှာမျက်နှာ၏အသိအမှတ်ပြုမှုခံရလိမ့်မည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့သည်လုံခြုံရေးစနစ်အနေဖြင့် TouchID လက်ဗွေရာနည်းပညာကိုဆက်လက်အသုံးပြုကြလိမ့်မည်။။ ဤအသစ် iPhone ၏ကင်မရာသည် iPhone 8 ၏စွမ်းဆောင်ချက်အသစ်များကိုဝေမျှပေးလိမ့်မည်။ iPhone 7s Plus ၏မှန်ဘီလူးနှစ်ခုသည် optical stabilization ရှိလိမ့်မည်။ iPhone 7s နှင့် 7s Plus တို့၏မျက်နှာပြင်သည် iPad Pro ၏မှန်ကန်သော Tone အင်္ဂါရပ်ကိုဝေမျှနိုင်သည်။
အဆိုပါဆိပ်ကမ်းအသစ်များသည်ကောလာဟလများအရလက်ရှိမော်ဒယ်များနှင့်တူညီသောစွမ်းဆောင်ရည်များ၌ရရှိနိုင်လိမ့်မည်။ လက်ရှိစျေးနှုန်းများနှင့်လည်းဆင်တူမည်၊ စတင်မိတ်ဆက်မည့်နေ့သည် iPhone 8 နှင့်အတူတူဖြစ်သည်။ သို့သော်ပထမအဆင့်တွင်၎င်းကိုရရှိနိုင်သည်ဒါကြောင့်ဒီမော်ဒယ်တွေကို iPhone 8 ထက်နိုင်ငံများစွာမှာရရှိနိုင်တယ်၊ ဒါမှမဟုတ်အနည်းဆုံးတော့ရဖို့ပိုလွယ်တယ်။
Apple TV အသစ် ၅
အက်ပဲလ်တီဗီသည် ၂ နှစ်သာရှိသေးပြီးပြိုင်ဆိုင်မှုကိုလေးစားမှုမရှိစေရန်၎င်းကိုအသစ်တဖန်ပြန်လည်မွမ်းမံရန်အချိန်ကောင်းဖြစ်သည်။ ဒီကိရိယာအကြောင်းအနည်းငယ်သာပြောထားတာဖြစ်လို့သူ့ရဲ့ဒီဇိုင်းနှင့်ဟာ့ဒ်ဝဲပြောင်းလဲမှုများကိုကျွန်ုပ်တို့မပြောနိုင်ပါ။ iOS2နှင့် HomePod ဆော့ဖ်ဝဲလ်မှရရှိသောရည်ညွှန်းချက်များမှရရှိသောတစ်ခုတည်းသောအရာသည် 11K နှင့် HDR ပါဝင်သောအကြောင်းအရာများနှင့်လက်ရှိမော်ဒယ်စတင်ချိန်တွင်လူအများစုကလွဲချော်ခဲ့သောလုပ်ဆောင်မှုများကိုရည်ညွှန်းသည်။ ရှေးရိုးစွဲအလောင်းအစားတစ်ခုသည် Apple TV အကြောင်းပြောလိမ့်မည်၊ လက်ရှိပြောင်းလဲမှုနှင့်အတူတူပင်အပြောင်းအလဲရှိသည် ဖော်ပြပြီးသောအသစ်အဆန်းများနှင့်အခြားအရာများမပါရှိခြင်းနှင့်၎င်းကိုထိန်းချုပ်ရန် Siri Remote အတူတူဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်စက်တင်ဘာ ၁၂ ရက်ကအဓိကကျသောအံ့အားသင့်စရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်နိုင်သော်လည်း၎င်းကိုကျွန်ုပ်မစဉ်းစားပါ။
စက်တင်ဘာလ ၂၅ ရက်နေ့တွင် Apple TV အသစ်၏ရရှိနိုင်မှုသည် iPhone မော်ဒယ်လ်အသစ်များနှင့်တိုက်ဆိုင်နိုင်သည်။ သို့မဟုတ်ပါက၎င်းသည် Keynote တွင်ကြေငြာချက်မှချက်ချင်းလက်ငင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ရရှိနိုင်သည့်မော်ဒယ်များနှင့်စျေးနှုန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ မူမသိရှိရသေးပေ။ ရှိသည် $ 32 အောက်မှာစျေးနှုန်းတစ် ဦး အခြေစိုက်စခန်း 100GB မော်ဒယ် ကျန်စျေးကွက်တွင်ရရှိနိုင်သောအခြားရွေးချယ်စရာများနှင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပြီးစျေးနှုန်းမြင့်မားသောအခြား 64 နှင့် 128GB မော်ဒယ်များဖြစ်သည်။ လက်ရှိ Apple TV4သည်၎င်း၏ 32GB ဗားရှင်းကိုဒေါ်လာ ၈၀ ၀ န်းကျင်ဖြင့်ရောင်းချရန်ကျန်ရှိနေသေးသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်အခိုင်အမာပြောရလျှင်၎င်းတို့သည်လေ့လာသုံးသပ်သူများ၏ထင်မြင်ချက်သာဖြစ်သည်။
Apple Watch LTE အသစ်
အက်ပဲလ်ပွဲကျင်းပသည့်နေ့ရက်နီးကပ်လာသည်နှင့်အမျှအင်အားတိုးပွားလာသောနောက်ထပ်အသစ်တစ်ခုမှာ Apple Watch မျိုးဆက်သစ်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ကောလာဟလများသည်အလွန်စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းသောကြောင့်အချက်အလက်အားလုံးကိုသီးသန့်ထားရန်လိုအပ်သည်။ eSIM (သို့မဟုတ် Apple SIM) ကြောင့်၎င်းသည်အနီးအနားရှိအိုင်ဖုန်းသို့မဟုတ်လူသိများသော WiFi ကွန်ယက်မလိုအပ်ဘဲအင်တာနက်ကိုချိတ်ဆက်ရန်အတွက် Apple Watch Series3အသစ်တစ်ခုကို၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဆက်သွယ်မှုဖြင့်ပြောဆိုသည်။ ၎င်းသည်ရာသီဥတုသို့မဟုတ်အီးမေးလ်ကဲ့သို့အပလီကေးရှင်းများမှမက်ဆေ့ခ်ျများ၊ အသိပေးချက်များသို့မဟုတ်ဒေတာများကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ခွင့်ပြုသော်လည်းပုံမှန်ဖုန်းခေါ်ခြင်းမပြုရန်။ ဟုတ်ကဲ့၊ FaceTime (သို့) Skype ကဲ့သို့သောအခြားလိုက်လျောညီထွေဖြစ်သော ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုခုကို သုံး၍ အသံခေါ်ဆိုမှုများကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
Appel Watch တွင် FaceTime ကင်မရာထည့်သွင်းရန်ကောလဟာလများကြာခဲ့ပြီဖြစ်သော်လည်းယခုအချိန်ထိမရောက်ရှိသေးပါ။ အသံခေါ်ဆိုမှုများကိုသာပြုလုပ်နိုင်ပြီး၊ အင်တာနက်မှတစ်ဆင့်သာမန်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများပြုလုပ်ရန်မလိုပါ။ ဒီ 4G ဆက်သွယ်မှုအတွက်ဘက်ထရီပိုမိုသုံးစွဲမှုကို Apple ဘယ်လိုလျော်ကြေးပေးမလဲ။ ၎င်းသည်လက်ရှိ AMOLED မှ microLED အသစ်သို့မျက်နှာပြင်၏နည်းပညာကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သည်ပိုမိုထိရောက်နှင့်နိမ့်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနှင့်အတူ။
အငြင်းပွားဖွယ်အကောင်းဆုံးအချက်မှာ Apple Watch အသစ်၏ဒီဇိုင်းဖြစ်သည်။ Bloomberg ကလက်ရှိမော်ဒယ်များနှင့်တူညီလိမ့်မည်ဟုအခိုင်အမာပြောကြားသော်လည်း Mark Grubber ကမူလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောဒီဇိုင်းရှိလိမ့်မည်ဟုအာမခံသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ဤဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည့်အချက်အလက်များထပ်မံဖော်ပြခြင်းမရှိပါ။ထို့ကြောင့်ဤထင်မြင်ချက်သည်အဆုံးသတ်သွားသည်ဟူသောထင်ယောင်ထင်မှားမှုများကိုမရခြင်းက ပို၍ ကောင်းသည်။ Apple Watch သည်စတင်မိတ်ဆက်ချိန်မှနှစ်နှစ်ကျော်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး Apple သည်၎င်း၏ဒီဇိုင်းပြောင်းလဲမှုကိုရွေးချယ်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းမှပေါ်ထွက်လာခြင်းမရှိသောကြောင့်၎င်းကိုပြသနိုင်ခဲ့သည်။
၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဆက်သွယ်မှုအသစ်အပြင်အရေးအပါဆုံးအပြောင်းအလဲများသည် software မှတစ်ဆင့်လာနိုင်သည်။ Apple သည် Apple Watch ၏ကန ဦး အတွေးအခေါ်ကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုနှင့်ကျန်းမာရေးအတွက်ပိုမိုအာရုံစိုက်သည့်ကိရိယာသို့ပြန်ပြောင်းလိုက်သည်ဖြစ်ရာ၎င်းသည်အလွန်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည် အသစ်မော်ဒယ်အားကစားတစ်ခုသာ။ ကြီးမြတ်အရေအတွက်အသစ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုစောင့်ကြည့်ရေးလုပ်ဆောင်ချက်များကိုဆောင်တတ်၏။ အိပ်စက်ခြင်းကိုစောင့်ကြည့်ရန်အာရုံခံကိရိယာတစ်ခုပြုလုပ်သည့် Beddit ကုမ္ပဏီကိုဝယ်ယူလိုက်ခြင်းကလည်း Apple Watch အသစ်သည်နောက်ဆုံးတွင်၎င်းအင်္ဂါရပ်ကိုထည့်သွင်းနိုင်မည်ဟူသောကောလာဟလများကိုများပြားစေခဲ့သည်။ လျော့နည်းဖွယ်ရှိသည် noninvasive blood glucose monitoring ကဲ့သို့သောကျန်းမာရေးဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ကောလာဟလများဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်။
ယခုပုံစံအသစ်၏ရရှိနိုင်မှုသည်ယခုနှစ်အကုန်အထိရောက်ရှိမည်မဟုတ်ဟုထင်ရပြီး၎င်းသည်ဤ Keynote တွင်ကြေငြာခဲ့သည့်အရှည်ဆုံးထုတ်ကုန်ဖြစ်လိမ့်မည်။ စျေးနှုန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း။ အရာအားလုံးသည်လက်ရှိစီးရီး ၂ နှင့်ဆင်တူနေမည်ဟုညွှန်ပြနေပုံရသည်သူတို့တက်မယ်ဆိုရင်သေးငယ်တဲ့ပမာဏရှိလိမ့်မယ်။ လက်ရှိမော်ဒယ်များကိုပိုမိုတတ်နိုင်သော ၀ င်ရောက်မှုအဆင့်ပုံစံများအနေဖြင့်ပိုမိုနိမ့်သောစျေးနှုန်းဖြင့်ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်။ Apple Watch အတွက်ပစ္စည်းများအသစ်များ၊ ဥပမာကြိုးများသို့မဟုတ်ပစ္စည်းအသစ်များပင်ဖြစ်နိုင်သည်။ Apple သည်မျိုးဆက်တစ်ခုစီတွင်ပြောင်းလဲနေသောအရာတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » အိုင်ဖုန်းဆိပ်ကမ်းများ » iPhone အတွက် X ကို » စက်တင်ဘာ ၁၂ ရက်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်ကနေဘာတွေမျှော်လင့်နိုင်သလဲ
Apple က iPhone 8 ကိုမြှင့်တင်ရန်ပူးတွဲ Apple Music နှင့် iCloud အစီအစဉ်ကိုကမ်းလှမ်းနိုင်သည်